पहाड – मझेरी डट कम
जस्को कुनै लेखकले एउटा निबन्ध लेख्न सकोस्
केही महिनाको छुट्टीमा घर फर्कँदा
केही छैन तर जरूर केही छ पहाडमा ।
तीसको दशकका एक कविले ‘साला पहाडमे क्या है’ शीर्षक राखेर एउटा कविता लेखे । जुन कविताले निक्कै समयसम्म शीर्षकीय चर्चा पाइरहृयो । पछिल्लो समयमा ती कवि कवितामा बेत बसिसके तर उनको कवित्वलाई त्यही एउटा कविताले हालसम्म बचाइराखेको छ । हुन त धेरै लेखेर पनि हुन्न क्यारे ! बचाउने भनेको त एउटैले नै रहेछ । महाकविले त्यसै भनेका होइन रहेछन् ‘मुनामदन’ बाहेक अरूको काम छैन भनेर । केही समय अघि यो पुस्ताका एकजना निबन्धकारले आफ्नो निबन्धको शीर्षक राखे ‘तपाईंको पहाड कहाँ हो ?’ त्यस निबन्धमा पनि निबन्धकारले पहाडसँगको सामीप्यलाई राख्न खोजेका छन् । पहाडलाई आफ्नो जीवनसँग साट्न खोजेका छन् । एकजना स्नातकोत्तरको शोधार्थीले वर्तमान पुस्ताकै एक कथाकारको जीवनी व्यक्तित्व र कृतित्वको विषयमा शोध गर्न लागेछन् र तिनले उनको पुर्ख्यौली थलो सोध्ने क्रममा साधेछन् ः तपाईंको पहाड घर कहाँ नि ? ती कथाकारको निक्कै पुस्ता तराईमा बितेको हुँदा उनले भनेछन् मेरो पहाड, मधेस भनेको नै सिराहा जिल्लाको राधोपुर हो । त्यस्तै एक दैनिक अखबारका साताको एकपटक स्तम्भ लेख्ने स्तम्भकारले पनि आफू जन्मे हुर्केको पहाडको विषय राखिरहन्छन् । त्यसमा पनि मलाई उनको लेखनको विषयवस्तु असाध्य मनपर्छ ।
एउटा समय थियो पहाडबाट बसाइँ सरेर मधेस, भुटान, दार्जीलिङ, सिक्किम, असम, बर्मा (म्यानमार) र मलायासम्म सुखको खोजीमा भौतारिने क्रम थियो । रोजीरोटी, व्यवसाय, अध्ययन, जागिर आदिका कारणले नेपालका पहाडी वस्तीहरू उजाडिएका थिए । त्यहाँको जीवन निक्कै कष्टप्रद थियो । महिनौँ दिन लगाएर भारी बोकेर सामानहरू ढुवानी गर्नु पर्दथ्यो र मानिस अलिकति सुख प्राप्तिको खोजीमा सुविधायुक्त ठाउँको बसाइँलाई रोज्ने गर्थे । त्यसैको पीडामा हाम्रा ती कविले कविता लेखे ‘साला पहाडमे क्या है’ ।
भौगोलिक बनावटअनुसार हाम्रो देशमा उच्च हिमाली शृङ्खला छ मध्यमा पहाडी भेग छ र तल्लो स्थानमा तराईको समथर मैदान छ । हामी हाम्रा नेताका भाषणहरूमा र योजनाविद्का योजनाहरूमा देख्न र सुन्न पाउँछौ उनीहरू निरन्तर भनिरहेछन् हामीसँग तराईमा अन्नको ठूलो भण्डार छ । पहाडी क्षेत्रमा फलफूल र पशुपालनको प्रचुर सम्भावना छ । हिमाली क्षेत्रमा हामीसँग सधैँभरि हिउँले ढाकिएका हिमालहरू छन् । अझ भनौँ हामीसँग सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ । ती हिमालहरूमा पर्यटनको विकास गर्न सक्यौ भने हामी कोही भन्दा कम छैनौँ । छिट्टै नै हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ ।
हाम्रा कविले कवितामा वर्णन गरेजस्तो अब पहाड रहनु हुँदैन भन्ने लाग्दछ । अब पहाडका मानिसहरू पनि शिक्षाबाट अघि बढिरहेका छन् विकासका कुराहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेर पहाडले माग्न थालेको छ र समयक्रमसँगै बाँदर लड्ने भीरहरूमा सडकहरू पुगिरहेका छन् । सडक विस्तारका कुराहरू पनि उठ्न थालेका छन् । पूर्वको चियो भञ्ज्याङदेखि सुदूरपश्चिमको झुलाघाटसम्म जोड्ने मध्य पहाडी राजमार्ग जोडतोडले बनिरहेको र तिनका लागि चाहिने पुलपुलेसाहरू बनेको समाचारसमेत आइरहेका छन् । यसबाट सबै नेपालीहरू खुसी छन् भने अझ पहाडवासीहरू झन् खुसी भएका होलान् भन्ने लाग्दछ । पूर्वमा मात्र सीमित भएको चियाखेती र अलैँची खेती यतिबेला कास्की पोखरा तरेर बाग्लुङसम्म पुगेको समाचार छ त्यो अझ महाकालीसम्म फैलिनु पर्छ दार्चुला र वैतडीसम्म पुग्नुपर्छ । जुम्ला र मनाङमा हुने स्याउ खेती अब धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङसम्म ढाकिनु पर्छ । पूर्वको तमोरको कोसेलीले पश्चिमको झुलाघाटसम्म फेरो मार्नुपर्छ पहाडी भेगमा फलेका सुन्तला, जुनार र कागतीले देशदेशावर फिँजाउनु पर्छ । सडकको सञ्जाल भएपछि बर्दियामा उत्पादित चामल सुर्खेतको बाटो हुँदै सिमिकोटसम्म सजिलै पुग्नुपर्छ र सुपथमोलमा पाउनुपर्छ पहाडी भेगमा उत्पादित जडीबुटीहरूले केही सीमित ठेकेदारहरू मोटाएका छन् । राज्यले यसमा विशेष चासो दिएर पहाड र पहाडवासीलाई अझ लाभान्वित गराउनु पर्ने होइन र ? योजनाविद्हरू र नेपाललाई नयाँ बनाउने नेताहरूमा यो सद्बुद्धि कहिले आउने हो ?
अझ पहाडको सबै भन्दा ठूलो उपयोगिता त नेपालबाट निरन्तर बगिरहेका नदीनालाहरूबाट खेर गइरहेको पानीलाई बिजुलीमा परिणत गर्न सक्नुमा रहेको छ । पहाडमा पावरहाउसहरू बनाउन सस्तो र सजिलो हुने कुरा विद्युत् विज्ञहरू बताउँछन् । हुन पनि आजसम्म भएका विद्युतीय आयोजनाहरू हेर्नुहोस् ती सबै नै पहाडमा नै छन् । ती आयोजनाहरू बनाउनका लागि सडक विस्तार गर्दा हाम्रो पहाड कति सुन्दर होला ? आफूले उपभोग गर्न नपाए पनि सन्ततिहरूले उपभोग गर्न पाउने भएपछि को मानिस खुसी नहोला र ।
पहाडमा सामुदायिक वनहरू छन् त्यसबाट पशुपालनको सम्भावना पनि त्यतिकै राम्रो देखिन्छ तर हामी आफ्नो देशमा श्रम गर्न छाडेर खाडी मुलुकका मरूभूमितिर आफ्ना जनशक्तिहरू दलालका माध्यमले बेचिरहेका छौँ र त्यही रेमिटेन्सले देश चलेको छ भन्दैछ सरकार । के सधैँ अर्कैको बाटो हेर्नुपर्ने हामीले ? अब देशमा आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दल, योजनाविद् र गर्न सक्ने सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट कामहरू गरौँ र देशलाई संवृद्ध पारौँ ।